I-Kn95 Mask, Imaski Evikelayo, Isivikelo Esilahlwayo - VTECH CHINA
Isiqeshana sekhala se-aluminium
Lungisa ukulingana kalula futhi unciphise ukuhogela kwezinto eziyingozi.
Ibhande lerabha elinwebekayo eliphakeme
I-Ultrasonic welding, idonsa umjuluko futhi ingaqinile
I-KN95 Imaski Yobuso Yokulwa Nothuli Elahlwayo
Kungani Khetha i-VTECH
Umkhiqizi ochwepheshe we-KN95
I-VTECH CHINA CO., LTD ingumkhiqizi ochwepheshe we-mask evikelayo ye-KN95. Le nkampani ifakwe indawo yokusebenzela engenalo uthuli, ilabhorethri yomkhiqizo kanye nohlelo olujwayelekile lokugcina izinto ezingavuthiwe nemikhiqizo eqediwe.
Umkhiqizo wethu ugunyazwe ngokomsebenzi ne-USA-FDA, EU-CE, kanye ne-China-GB.
Imigqa yokukhiqiza imaski eyi-12
Kunemigqa yokukhiqiza eyi-12 yamamaski e-KN95 alahlwayo anomphumela wansuku zonke we-1,000,000.
Thumela emazweni amaningi
Imaski ye-VTECH KN95 ayithengiswa kuphela ekhaya, kodwa futhi ithunyelwa eYurophu, e-USA, ePanama, njll.
Isikhumba esinobungane&Safety 3s Indwangu ethambile engalukiwe
zivikele wena nabantu abaseduze kwakho.
I-China ibilokhu ihlinzeka ngosizo kwamanye amazwe ukulwa ne-COVID-19 ngenhloso eyodwa yokuzama ukusindisa izimpilo zabantu abaningi ngangokunokwenzeka, kusho iKhansela Lombuso kanye noNgqongqoshe Wezangaphandle uWang Yi ngeSonto.Engqungqutheleni yezindaba ebibanjwe...
Qinisekisa ukuthi impilo yakho yokuphefumula iwumsebenzi wethu waphakade
BEIJING - Abalawuli baseShayina bathathe izinyathelo ezintsha zokuqinisa ukulawulwa kwekhwalithi yokuthunyelwa kwempahla yezokwelapha emazweni angaphandle futhi baphinde balawule izinqubo eziphumayo ukuze kusize kangcono impi yomhlaba wonke yokulwa nesifo se-coronavirus (COVID-19) ...